2-Methoxyestradiol (362-07-2) hplc≥98% ကိုဝယ်ပါ။ | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / SARMS / 2-Methoxyestradiol (၃၆၂-၀၇-၂)
5.00 ထဲက5အခြေခံ 1 ဖောက်သည် rating
SKU: 362-07-2. အမျိုးအစား: SARMS
AASraw သည် CGMP စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ခြေရာခံနိုင်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အောက်တွင်ဂရမ်မှ 2-Methoxyestradiol (362-07-2) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ရှိသည်။
2-Methoxyestradiol (362-07-2) ဗီဒီယို
2-Methoxyestradiol (362-07-2) Specification:
ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ: ထုတ်ကုန်အမည်: 2-Methoxyestradiol
CAS အမှတ်: 362-07-2
2-Hydroxyestradol 2-methyl အီ
သိုလှောင်မှု: အပူပိုင်း, မှောင်မိုက်
စာရွက်စာတမ်းများ (COA & HPLC စသည်): ရရှိနိုင်
2-Methoxyestradiol (362-07-2): Description:
ထို့အပြင် 2-ME ဟုလူသိများသော methoxyestradiol အမှုန့်သည် antineoplastic လုပ်ဆောင်မှုနှင့်အတူနှုတ်ဖြင့် bioavailable estradiol metabolite ဖြစ်သဖြင့် angiogenesis inhibitor ဖြစ်ပြီး vasodilator အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
2-Methoxyestradiol သည် endothelial cell proliferation ကိုလျှော့ချပြီး endothelial cell apoptosis ကိုသွေးဆောင်ခြင်းဖြင့် angiogenesis ကိုတားဆီးပေးတယ်။ ဤသည်အေးဂျင့်ကိုလည်း tubulin မှ binding, antimitotic လှုပ်ရှားမှုအတွက်ရရှိလာတဲ့နှင့် G2 အဆင့်ဆဲလ်သံသရာဖမ်းဆီး, DNA ကိုအပိုင်းအစများနှင့် apoptosis အတွက်ရလဒ်, caspase activation သွေးဆောင်ခြင်းဖြင့်အကျိတ်ဆဲလ်ကြီးထွားမှုကိုတားစီး။
1: Perez-Sepulveda A, España-Perrot PP, Norwitz ER, Illanes SE ။ 2-methoxyestradiol ပေါင်းစပ်နှင့် preeclampsia အတွက်၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ involved များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဇီဝဖြစ်စဉ်လမ်းကြောင်း။ Reprod သိပ္ပံ။ 2013 ခုနှစ်စက်တင်ဘာ; 20 (9): 1020-9 ။ Doi: 10.1177 / 1933719113477483 ။ Epub 2013 ခုနှစ်မတ်လ 1. ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ PubMed PMID: 23456663; PubMed ဗဟို PMCID: PMC3745713 ။
၂: Machado-Linde F၊ Pelegrin P၊ Sanchez-Ferrer ML, Leon J, Cascales P၊ Parrilla JJ ။ endometriosis ၏ pathophysiology အတွက် 2-methoxyestradiol: angiogenesis နှင့်ကုထုံးအလားအလာအာရုံစိုက်ပါ။ Reprod သိပ္ပံ။2အောက်တိုဘာ; 2012 (19): 10-1018 ။ Doi: 29 / 10.1177 ။ Epub 1933719112446080 သြဂုတ် 2012 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ PubMed PMID: 8 ။
3: Peyrat JF, Brion JD, Alami M. Synthetic 2-methoxyestradiol အနကျအဓိပ်ပါယျ: ဖွဲ့စည်းပုံ - လှုပ်ရှားမှုဆက်ဆံရေး။ Curr Med Chem ။ 2012; 19 (24): 4142-56 ။ ပြန်လည်သုံးသပ်။ PubMed PMID: 22709003 ။
4: Verenich S, Gerk pm တွင်။ 2-methoxyestradiol ၏ကုထုံးနှင့်၎င်း၏မူးယစ်ဆေးဝါးစိန်ခေါ်မှုများ။ Mol Pharm ။ 2010 ဒီဇင်ဘာ 6;7(6): 2030-9 ။ Doi: 10.1021 / mp100190f ။ Epub 2010 အောက်တိုဘာ 21 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ PubMed PMID: 20831190; PubMed ဗဟို PMCID: PMC3059899 ။
5: Mueck AO, Seeger အိပ်ချ် 2-Methoxyestradiol- ဇီဝဗေဒနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်ယန္တရား။ Steroid တစ်မျိုး။ 2010 အောက်တိုဘာ; 75 (10): 625-31 ။ Doi: 10.1016 / j.steroids.2010.02.016 ။ Epub 2010 မတ်လ7ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ PubMed PMID: 20214913 ။
LGD3303 ကုန်ကြမ်း Powder ချက်ပြုတ်နည်း
Estradiol ဟီဟိုက်ဒရိတ် (35380-71-3)
Cetilistat (Oblean) အမှုန့်
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော 2.605ထဲက
alpha GPC အမှုန့်
Tadalafil (Cialis) အမှုန့်
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော 3.365ထဲက
CDP choline အမှုန့်
Lorcaserin (Belviq) အမှုန့်
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော 3.505ထဲက
မဂ္ဂနီစီယမ်, L-threonate အမှုန့်
R & D ဓါတ်ကူပစ္စည်း (39)
Estradiol အမှုန့်စီးရီး (4)
သင်က Pregabalin အကြောင်းသိထားသင့်အရာအားလုံးကို
03 / 03 / 2020 ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က
ဘယ်လို Orlistat ကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေးဝါးအဖြစ်အလုပ်လုပ်သလဲ
03 / 02 / 2020 ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က